Saron’ny polisy tao Betanimena Ambatondrazaka, halina, nandritra ny fanaraha-maso nataon’izy ireo ny lehilahy telo niaraka tamin’ny basy Revolver Smith iray. Nilaza izy ireo fa miandry omby handalo teo amin’ilay toerana nahatratrarana azy ireo. Nanambara ny lefitry ny lehiben’ny Polisy eto Ambatondrazaka, Kaomisera Rakotondrazaka Camille fa tsy manana taratsy fahazoan-dalana hitana basy izy ireo.
Zara raha mandeha adiny roa ny jiro eto Sambava nanomboka ny talata teo. Nampiantso mpanao gazety ireo mpanjifa androany, naneho ny hatezerany sy ny alahelony fa simba avokoa ireo sakafo tehirizina, ny akora izay tokony ahodina hitadiavam-bola. Manomboka nampiaka-peo ny mpanjifan’ny Jirama manoloana izany. Ny Sekretera jeneralin’ny Faritra SAVA, Sabotsy Samuel moa omaly dia nilaza fa voatery nohamafisina ny fihambenana ny foibe misy ireo milina mpihary herinaratry ny Jirama indrindra taorian’ny nahamay ny biraon’ny Jirama Andapa, hisorohana ny fihetsika tsy voahevitra ateraky ny hatezeran’ny olona.
Manararaotra ny haratsian-dalana amin’ny lalam-pirenena faha-2 ao Manambonitra ireo andian-jiolahy mpanakan-dalana sy mpandrava entana sy mpandeha, izay efa naharaisan’ny Zandary tao Brickaville sy teto Toamasina ary ny tao Antananarivo fitarainana maro. Omaly alarobia tokony ho tamin’ny 09 ora alina no saron’ny Zandary avy ao Brickaville ny roa tamin’ireo mpanao izany asa ratsy izany. Mbola tratra teny amin’izy ireo ny basy poleta iray fampiasan’izy ireo andrahonana ireo mpandeha sy ny mpamily. Atao famotorana ao Brickaville izy ireo amin’izao fotoana izao.
Isan-taona dia mikarakara manokana ny Salon de l’étudiant ny MADA JEUNE Ho an’ity volana janoary ity anefa dia miantso ireo mpianatra izy ireo izay tsy tonga tamin’ny volana oktobra iny, izay tao anatin’ny fialantsasatra, ary nisy ihany koa ireo izay nanao ny fifaninana tany amin’ny oniversitem-panjakana, koa dia izay no nahatonga ny MADA JEUNE hikarakara ireo mpianatra. Ho fanampin’izany dia misy hatrany toy ny isan-taona ny Guide na toro-lalana izay amidy 2000 Ariary. Izany moa dia atao ao amin’ny lapan’ny fanatanjahan-tena Mahamasina androany sy rahampitso 13 Janoary 2017 izay misokatra ho an’ny rehetra, ary tsy misy ny vidim-pidirana. Manodidina ny 3000 eo ho eo ny olona andrasana amin’izany, ary miisa 25 ny toeram-pampianarana mandray anjara amin’ity Salon ity.
Nandefa iraka tany Andranomanelatra Antsirabe ny Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana, nanao fanadihadiana ny fiantraikan’ny fihodinan’ny orinasa Tiko izay tantanin’ny Triple A (AAA) ankehitriny, amin’ny resaka tontolo iainana. Mitady hirika hanakatonana ny orinasa “Triple A” ny Fanjakana ka ny vokatr’io fanadihadiana amin’ny fiantraikany amin’ny tontolo iainana io no hanamarinana ny firosoany amin’ny fanatanterahana izany.
Efa tsy mahataitra ny olona intsony ny fahatapahan-jiro raha eto Mahajanga. Mahazo ny anjarany avokoa ireo Fokontany miisa 26 eto an-toerana. Mila ho adiny sivy isan’andro ny fahatapahana. Vao maraina amin’ny dimy dia efa tapaka ny jiro ary tsy miverina izany raha tsy efa amin’ny sivy ora alina. Sahirana ireo mpianatra rehefa hamerin-desona any an-trano, voatery ravaina mialoha ny mianatra hariva fa maizina ny ao an-dakilasy. Nanao fanambarana ny tomponandraikitra ao amin’ny Jirama fa tsy hisy intsony ny delestazy manomboka anio alakamisy, ka samy miandry ny fahatanterahan’izany ny rehetra.
Marovoay : Sady tsy jiro no tsy rano
Telo andro izao no tsy misy jiro eto Marovoay, Faritra Boeny, tapaka nanomboka omaly alarobia ihany koa ny rano eto an-tanàna. Sahirana avokoa ireo manao asa fihariana miankina amin’ny herinaratry ny Jirama.
jeudi, 12 janvier 2017 10:47
Sambava : Nanjavona teny an-tsena ny sira
Nifandrobahana ny sira teny amin’ny mpivarotra iray tamin’ireo roa hany sisa mbola nahitana sira omaly teto Sambava, fa tsy ahitana sira intsony eto an-tanàna amin’izao. Na ireo mpivarotra ambongadiny aza efa nanomboka ny farany taona teo iny no tsy nahita izany, izao anefa lany tanteraka ny tahiry. Misy manararaotra mibizina ka mivarotra sira 500 Ar ny kapoaka. Vao io maraina io no nisy sira vao tonga amin'ny mpivarotra iray fa dia iadivana, nefa i Sambava dia akaiky an'Antsiranana mpamokatra sira.
CENI: Nanao fanambaram-pananana
Notontosain’ny CENI omaly alarobia 11 janoary ny fanambaram-pananana teny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana Ambohidahy. Ry zareo kaomity mahaleo tena momba ny fifidianana izany no nanao izany fanambarana izany voalohany tamin’ity taona vaovao ity.